Iku: Scandinavian ụgbọ elu SAS na-ajụ 70,000+ njem
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Iku: Scandinavian ụgbọ elu SAS na-ajụ 70,000+ njem
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Denmark na -agbasa akụkọ • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Norway • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ihe karịrị ndị njem 70,000 nwere ike ịdọta taa na-efegharị, si ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọelu dị na Scandinavia. Nke a bụ mgbasa ozi mgbasa ozi nke SAS CEO Rickard Gustafson dere. “N’agbanyeghi mkparita uka kpụ ọkụ n’ọnụ na mkpebi siri ike izere esemokwu, ọ dị nwute na anyị emeghị nke ọma. Ndị ọrụ ndị ọkwọ ụgbọ elu ekpebiela taa na ha ga-abụ abụbọ ọrụ. ” Emere ụgbọ elu ndị mmekọ codeshare adịghị emetụta.
Scandinavian ụgbọ elu, nke a na-akpọkarị SAS, bụ onye na-ebu ọkọlọtọ nke Sweden, Norway na Denmark, bụ ndị jikọtara ọnụ Scandinavia. SAS bụ ndebiri nke aha ụlọ ọrụ zuru ezu, Scandinavian Airlines System ma ọ bụ Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden.
Ozi na weebụsaịtị SAS kwuru, sị:
O wutere anyị ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ụgbọelu Swedish, Norwegian na Danish na-anya ụgbọelu na-aga n'ihu na-egbu oge ma kwụsịkwa ụgbọ elu. Anyị na-eme ihe niile anyị nwere ike ime iji nyere onye ọ bụla aka.
SAS na-agbasi mbọ ike iji nweta azịza ngwa ngwa o kwere mee iji gbochie nsogbu ndị ọzọ na-agagharị.
Tupu ị gaa ọdụ ụgbọ elu, biko lelee ọnọdụ ụgbọ elu gị. Maka ozi nke oge banyere ọnọdụ okporo ụzọ, biko gaa na webụsaịtị anyị.